Nadiifinta Eureka FC9 oo Iibka ah waqti xadidan | Androidsis
Nadiifiyaha Eureka FC9 oo Iibka ah waqti xadidan
daniplay | 29/11/2021 15:44 | La cusbooneysiiyay 29/11/2021 15:52 | Qalabka kale
Automation-ka gurigu wuxuu noqday tiir asaasi ah guri kasta oo aduunka ku yaal. Mid kasta oo ka mid ah walxaha waa lama huraan, mid ka mid ah waqti ka dib noqday mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa nadiifiyaha vacuum, taas oo ay ugu mahadcelinayso horumarka ayaa muujinaya caqli badan marka ay timaado waxtarka.
Xaaqinka caadiga ah iyo xaaqinka ayaa miisaankoodu luminayey marka la barbardhigo nadiifiyeyaasha faakuumka iyo robots-yada caqliga leh, tan iyo markii ay nuugeen siigada oo ay awoodaan inay xoqaan. Meesha ay ku nooshahay maaha mid aad u badan, sidaas darteed waxay ka dhigaysaa hadiyad ku habboon munaasabad kasta oo sanadka ah, ama taariikhahaas, taariikh gaar ah ama hadiyad ka timid Boqorrada.
Waad heli kartaa Eureka FC9 vacuum cleaner oo iib ah kaliya € 339,99 (€ 60 ka jaban) samaynta halkan guji.
Mid ka mid ah nadiifiyeyaasha faakuumka ee soo jiidata dareenka badan waa Eureka FC9, faakuum nadiifiye leh tignoolajiyad horumarsan, lama huraan u ah waqtiyadan. Waa wax badan, gaar ahaan marka ay timaado nadiifinta iyo jeermiska sagxadaha iyo sagxadaha, hadday tahay dhul adag, dhex dhexaad iyo roogag.
1 Astaan ​​qarni jirsatay oo ka danbeysa nadiifiyahan cusub
2 Eureka FC9 waxay la timid laba matoor
3 Isbarbardhigga Tineco Floor One S3
4 Faakuum nadiifiye aad faa'iido u leh
4.1 Macluumaadka farsamada
5 Iibka wakhti xaddidan
Astaan ​​qarni jirsatay oo ka danbeysa nadiifiyahan cusub
EUREKA waa astaan ​​leh nolol ka badan 100 sano, kaas oo wakhtigan ka dib go'aansaday inuu bilaabo qalab nadiifin kacaan ah si uu si buuxda u cusbooneysiiyo waayo-aragnimada nadiifinta. Soo-saaruhu wuxuu bilaabay tignoolajiyada jeermiska biyaha ee elektrolytka ka dib boqollaal sano.
Alaabta ugu horeysa ee ku qalabaysan tignoolajiyadan waa Eureka FC9 vacuum cleaner., kaas oo ah qalab nadiifin kacaan ah oo dhan walba ah. Tiknoolajiyada cusub ee gaarka ah ayaa ka dhigaysa inay furto waa cusub, laakiin waxay gaadhay dhammaan macaamiisha adduunka, maadaama lagu iibin doono meelo badan oo adduunka ah.
Eureka FC9 waxay ku qalabaysan tahay tignoolajiyada korantada biyaha ee gaarka ah waxay dhalin karaan biyo korantada leh oo leh saamayn jeermis-dilid xoog leh kaliya ku darida biyaha weriyaha, sidaas darteed beddelka curiye kasta oo kiimiko ah oo jeermis dila.
Heerka jeermiska ayaa ku dhawaad ​​100%, dammaanad qaaday saameynteeda nadiifinta mar kasta. Intaa waxaa dheer, marka la barbardhigo nadiifiyeyaasha vacuum ee suuqa, ma aha sun mana ka tagi doonto nooc kasta oo hadhaa ah. Macaamiishu maaha inay ka werweraan xidhiidhka suurtogalka ah ee carruurta, maadaama aanay waxba ka tagin.
Eureka FC9 waxay la timid laba matoor
Eureka FC9, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa ku dar biyo nadiif ah, shid faakuumka oo u wareeji meelaha oo dhan. Nuugista xooggan ilaa 8000pa Waxaad isla markiiba nadiifin kartaa meelaha boodhka iyo alaabta sida qashinka, alaabta inta badan ay adag tahay in la saaro. Si la mid ah, waxay ka saartaa dhammaan noocyada raadadka, ha ahaato mid qalalan, qoyan iyo nooc kasta oo boodh ah.
Nadiifiyaha Eureka FC9 wuxuu ka kooban yahay laba matoor oo awood leh, kaas oo ka dhigi doona inuu sii daayo ilaa 78 dB, oo aan la dareemin marka lagu nadiifinayo guriga. Isla mar ahaantaana, burushka rullaluistemadka ah ee xawaaraha sare leh ayaa nadiifin doona dhulka isaga oo aan ka tagin ur oo kuma koobna oo kaliya tiirarka adag, roogagga iyo sagxadaha marka ay nadiifiso, xaaqin iyo xoqin.
Waayo-aragnimada iyada ayaa noqon doonta mid aad u fiican iyo sidoo kale dabacsanaan. Kadib bilawga, burushka wareegaya wuxuu yeelan doonaa xoog jiidis u gaar ah, iyo nadiifiyaha faakuumku si toos ah ayuu u ogaan doonaa heerka wasakhda wuxuuna hagaajin doonaa xoogga nuugista, kaas oo lagu nadiifin karo hal gacan, dhammaan iyada oo aan wax xoog ah soo saarin.
Isbarbardhigga Tineco Floor One S3
Marka la barbardhigo faakuumka Tineco's Floor One S3, Eureka sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin muuqda: 750 ml haanta biyaha nadiifka ah + 650 ml haanta wasakhda (600 ml + 500 ml ee Tineco), taas oo awood u yeelan doonta in ay nadiifiso qol 100 m2 ah hal mar, dhammaan iyada oo aan dib loo rarin.
Jaranjarada Tineco ee ay adagtahay in la faaruqiyo waxaa hagaajiyay Eureka iyagoo keenay nashqad nadiifin gees ka wanaagsan, oo gaadhay gees kasta. Si loo xalliyo dhibaatada nadiifinta gacanta ee rullaluistemadkaAma ka dib markii wax walba ay soo mareen dabaqa, Eureka waxay soo bandhigtay tignoolajiyada nadiifinta tooska ah.
Si ka duwan faakuumyada kale ee u baahan in gacanta lagu nadiifiyo, Isticmaaluhu wuxuu kaliya u baahan yahay inuu riixo badhanka is-nadiifinta Eureka FC9, Nadiifiyaha faakuumku wuxuu si toos ah u nadiifin doonaa buraashka wareega iyo tuubada, habka oo dhanna wuxuu ahaan doonaa mid biyo la'aan ah, dadaal la'aan. Tani waxay si weyn u badbaadin doontaa macaamilka maadaama aysan jirin baahi loo qabo in meesha laga saaro oo gacanta lagu nadiifiyo.
Faakuum nadiifiye aad faa'iido u leh
Eureka FC9 waxay wanaajisaa hufnaanta nadaafadda guriga, Dhammaan iyada oo loo marayo naqshadaynta isku dhafan, xoqidda iyo nadiifinta, waxay sidoo kale si buuxda uga fogaan kartaa welwelka dadka ee tignoolajiyada u gaarka ah, waxay bixiyaan hal-badhan is-nadiifinta iyo nadiifinta geesaha.
Waxaa loogu yeeraa in ay noqoto mid ka mid ah nadiifiyeyaasha ugu cusub ee nadiifiyaha, tani waxay hubaal ka heli doontaa qaar ka mid ah abaal-marinaha kala duwan ee qalabka nadiifinta ee suuqa, dhammaan mahadnaqa shaqada ka dambeysa qaabkan. Eureka FC9 waxay rabta inay xoog ku gasho suuqa, Thanks to xaqiiqda ah in ay la timaado qiimo aad u macquul ah.
MADAXWEYNAHA 220 watts
Buuq 78 dB
CODKA 650 sentimitir cubic
CODKA 9.02 kg
Qiyaasta X x 73.8 35.4 29.6 cm
Iibka wakhti xaddidan
Nadiifinta nadiifiyaha Eureka FC9 ayaa sidoo kale bilowday qiimo dhimis waqti xaddidan ah oo qiimihiisu yahay 339,99 euro, halkii € 399,99 asalka ah, oo dhammaan dhammaanaya Diisambar 10, waqtiga kama dambaysta ah ee bixinta. Isticmaalayaashu waxay ka iibsan karaan vacuum cleaner-ka bogga Amazon xidhiidhkan ilaa maalintaas ka hor saqda dhexe.
Way ku fiican tahay haddii aadan haysan vacuum cleaner, waxaad doonaysaa inaad bedesho kii hore ama aad hadiyad u samayso xubin qoyska ama saaxiibka maalin gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Nadiifiyaha Eureka FC9 oo Iibka ah waqti xadidan
ZMI PowerPack No. 20 ayaa La Daah-furay - Batari Dibadeed Is haysta oo Kacaan ah oo ku dallaca 16-inch MacBook Pro
Tivify: waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa beddelka Netflix?